ပခုက္ကူခရိုင် ပေါက်မြို့နယ် သုံးမွှာတာချောင်း ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှုများ ကြုံတေ?? - Yangon Media Group
ပခုက္ကူခရိုင် ပေါက်မြို့နယ် သုံးမွှာတာချောင်း ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှုများ ကြုံတေ??
ပခုက္ကူခရိုင် ပေါက်မြို့နယ် သုံးမွှာတာချောင်းကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေရှားပါးမှုများ ကြုံတွေ့နေရပြီး စက်ရေတွင်းတူးဖော်ပေးနိုင်မှသာ သောက်သုံးရေရှားပါးမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကျေးရွာမှရာအိမ်မှူး ဦးမြဝင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဧပြီ ၆ ရက်က ပြောသည်။ အဆိုပါဒေသတွင် သောက်သုံးရေရရှိရေးသည် ရေကန်ကိုသာ အဓိကအားထားပြီး နွေရာသီပူပြင်း လာသည်နှင့်အမျှ ကန်များမှ ရေများခန်းခြောက် လာခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေရှားပါးမှု ဖြစ်ပေါ် လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဦးမြဝင်းက ”ကျွန်တော်တို့ရွာက သောက်သုံး ရေက ရေကန်ကိုပဲ အားထားနေရတယ်။ နေပူတာနဲ့အမျှ ကန်ကရေခန်းခြောက်မှု မြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်တာပါပဲ။ ကန်ရေမရှိရင် သောက်သုံးစရာရေ မရှိ တော့ပါဘူး။ စက်ရေတွင်းလည်း ပေရှစ်ရာကျော် အထိတူးမှ ရေရတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရွာအနေနဲ့ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အခုလိုနွေရာသီမှာ ရေရှားပါးမှုကို ကြုံတွေ့ရတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ဌာနဆိုင်ရာတွေ၊ အလှူရှင်တွေ လာလှူတဲ့ရေကိုပဲ မျှသုံးရတာပေါ့။ စက်ရေတွင်းတူးဖော်နိုင်မှသာ အဆင်ပြေမှာပါ”ဟု ပြောသည်။ အဆိုပါကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၆၂ အိမ်၊ လူဦး ရေ ၃၆၂ ဦး နေထိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးမြဝင်းက ”စက်ရေတွင်းတူးမယ်ဆိုရင် သိန်း တစ်ရာကျော်လောက်ကုန်မှာဆိုတော့ ရွာအနေနဲ့ ကျတော့လည်း မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် အလှူ ရှင်လာလှူရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ စောစောပိုင်း ကဆိုရင် ကန်ရေက နောက်နေတာ။ အဲဒီရေအနောက် တွေကိုတောင်သုံးရတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှ ရေလာ လှူတဲ့သူတွေရှိလို့ အလှူရှင်တွေလာလှူတဲ့ရေကို ပဲ စောင့်ပြီးသုံးစွဲနေရတာပါ” ဟုဆက်လက်ပြောသည်။ အဆိုပါကျေးရွာ သောက်သုံးရေရှိရေးအတွက် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများက သွား ရောက်လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပေါက်မြို့နယ် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ပေါက်မြို့နယ်ထဲမှာတော့ ဒီတစ်ရွာပဲ သောက်သုံးရေရှားပါးမှု ဖြစ်ပေါ်ပါသေးတယ်။ ဒါကိုလည်းပြေလည်ဖို့ ရေဖြန့်ဝေရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ရေတိုအနေနဲ့က တော့ လက်တလော ရေပေးဝေနေရတာပေါ့။ ရေ ရှည်အတွက်ကတော့ မြေအောက်ရေတိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ရွာထဲမှာတော့ ရေတူးဖော်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ရွာနဲ့ နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာမှာတော့ စက်ရေတွင်းတူး ဖော်ရင်တော့ ရနိုင်ပါတယ်။ ရေတွင်းတူးဖော်ပေး နိုင်ဖို့အတွက် အဆင့်ဆင့်ကိုလည်း တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ အဆိုပါကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပခုက္ကူခရိုင် ပေါက်မြို့နယ်တောင်ဘက်စွန်း ပုသိမ်- မုံရွာအဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏ အနောက်တောင်ဘက် သုံးမိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ပဲခူးတိုင်းရပ်/ ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ပွဲတွင် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပ??
နိုင်ငံသား မဟုတ်သူများအား မောင်တော တောင်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်နေရာ ချမထားရေး အရေးကြီး အဆို ပြည?
နှလုံးရောဂါ ဖောက်မှုအတွက် သွေးစမ်းသပ်မှု ချက်ချင်းပြုလုပ်နိုင်
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရပ်ရွာအခြေပြု ခရီးသွား လုပ်ငန်းဒေသများသို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီး